Jikwaa Fire TV na olu (yana Echo, Alexa na-enweghị njikwa) ulator Emulator.online ▷ 🥇
Ọ bụrụ na anyị nwere ngwaọrụ Amazon Echo, dịka ezigbo Echo Dot, ugbu a ọ ga-ekwe omume Nye iwu na Fire TV Stick n'iji olu gị, na-enweghị mkpa maka akara ntanetị. Sin mgbe ahụ nwere pịa olu akara isi na Fire TV ime akara, ị nwere ike ịmegharị menu naanị site na ikwu okwu, ekele maka njikọ dị n'etiti Fire TV na Echo. Site na sistemụ a, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịchọ ngosipụta, ihe nkiri na ihe nkiri TV, kamakwa ịmalite ma kwụsịkwa egwu ahụ, laghachi wee lelee ozi ndị enyemaka olu na-arịọ na TV, dị ka ihu igwe, kalenda ma ọ bụ ndị ọzọ. I nwekwara ike ịlele onyonyo weghaara site na igwefoto nche jikọtara na Alexa na TV ma nyekwa ihe ọzọ mgbe ị na - enweghị ike ịchọta Fire TV Stick dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ na ịchọghị ibili ijide ya ma chịkwaa ihe niile site na olu gị.
Nanị ihe achọrọ iji Fire TV na olu bụ na ọ na-ejikọ ya na ngwaọrụ Amazon Echo. Enwere ike ịme nke a ugbu a, na-eji ngwa Alexa na gam akporo ma ọ bụ iPhone. Ọ bụrụ na otu Amazon akaụntụ melite na Fire TV na ikwughachi, ma ọ bụrụ na Alexa ngwa na-nyeere ke Fire TV ntọala, dị nnọọ jiri Alexa ngwa na ekwentị gị ka tinye Fire TV na ikwughachi ihe ndị na-achịkwa.
Na ngwa Alexa, gaa na taabụ Ndị ọzọ, wee metụ Nhazi ke akpatre ke TV na vidiyo: Ebe i nwere ike pịa Fire TV na akara ngosi ịgbakwunye ngwaọrụ ka Alexa akara. Akpaka pairing nwere ike mezuo site n'ịgwa Alexa na ikwughachi egwu a nkiri; Mgbe ahụ Alexa ga-ajụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbalite njikwa olu olu TV.
Ozugbo emere nke a, na-ejighị ekwentị ma ọ bụ akara ntanetị, ọ ga-ekwe omume gwa anyị Echo ma ọ bụ Echo Dot ngwaọrụ: Ihe dika "Alexa, gosi m ihu igwe"iji hụ amụma ihu igwe na TV TV, na-enweghị iji olu gị zaghachi.
Iwu kachasị baa uru na Alexa iji jikwaa Fire TV dị ka ndị a:
Alexa Apri Netflix (enwere ike iji ya maka ngwa arụnyere ọ bụla).
Alexa chọta "aha" (Alexa ga-achọ ihe nkiri ma ọ bụ ihe ngosi sitere na ngwa niile arụnyere, dị ka Netflix ma ọ bụ Prime Video.)
Alexa tinye aha ihe nkiri ahụ (ịmalite ozugbo ị na-egwu ihe nkiri ị na-achọ).
Alexa na-achọta comedies (Alexa ga-achọ ihe nkiri na ụdị a.)
Alexa chọọ aha na Youtube (ka ịchọọ Youtube; nyocha a kapịrị ọnụ anaghị arụ ọrụ maka ngwa niile).
Alexa Laghachi na Homelọ O Laghachi n'ụlọ (ịlaghachi na ihuenyo mbụ).
Alexa Họrọ (iji họrọ igbe dị na Fire TV interface).
Alexa Gaa aka ekpe ma obu aka nri (ịkwaga nhọrọ ahụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri site na otu).
Alexa Swipe aka ekpe ma obu aka nri (ịkwaga nhọrọ ahụ n’aka nri ma ọ bụ aka ekpe ihe anọ iji mee ngwa ngwa).
Alexa vai giu o vai su (ịgbago na ala na nhọrọ nhọrọ).
Alexa lee vidiyo m (ịga na ngalaba vidiyo m nke Prime Video).
Ebe ọ bụ na ị nwere ike ịhụ ozi ihu igwe na TV site na iji olu gị jụọ Alexa, ị nwekwara ike ịjụ:
"Alexa, gosi m kalenda"
"Alexa, gosi m igwefoto"
"Alexa, gosi m ihe m ga-eme"
"Alexa, gosi m okporo ụzọ na Rome"
"Alexa, gosi m ndepụta ịzụ ahịa"
Maka usoro aghụghọ iji nwalee Fire TV na Echo, anyị ahụla isiokwu ọzọ na otu esi gee ntị na igwe okwu TV (ya na FireTV) na Amazon Echo
EGO: Jiri olu gị chịkwaa TV
Ọ bụrụ n’ịchọrọ n’ezie ịchịkwa TV gị na olu gị, ị nwere ike ịme ya site na ịzụta ngwaọrụ nwere ike ịgbanwe iwu olu Alexa na iwu nchịkwa. Ndị ọzọ okwu, ị nwere ike ịgbanwe ọwa na gị TV na iji olu gị ekele na Amazon ikwughachi. Iji mee nke a, ị ga-azụta ngwaọrụ dịka Smart Home Hub maka euro 20, nke na-enye gị ohere ijikwa ihe ọ bụla site na iji olu dị anya.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Otu esi ejikọ Alexa na TV ọ bụla